Momba anay - Zhangjiagang Riching Machinery Co., Ltd.
Zhangjiagang Riching Mahcinery dia mamokatra sy mivarotra mekanika, manampahaizana manokana amin'ny milina plastika. Ny mpampiasa vola dia efa niasa tamin'ny sehatry ny indostrian'ny plastika nandritra ny taona maro.
Ny orinasantsika dia misy ny fanasana plastika sy ny fitaovana fanodinana entana, extruder, milina shredder, milina fanenjanana, kojakoja ho an'ny milina plastika sns fitaovana.
- Ny tombotsoantsika -
Manangona ny injeniera efa za-draharaha indrindra amin'ny sehatry ny industy plastika izahay, mpivarotra efa niorina tsara izahay ary olona mpanompo aorian'ny varotra, Izay mahatakatra tsara ny haitao, miaraka amin'ny fahaizana miresaka ary amin'ny fahaizany maneho hevitra amin'ny teny anglisy voasoratra sy miteny.
Cost & vidiny
Izahay (mpamatsy vola rehetra) dia mampiditra fampidirana rojom-pandrosoana ho an'ny faritra lavitra, koa mizara amin'ny sehatra fivarotana sy ny loharanon-karena ary injeniera, izay mampihena ny vidin'ny famokarana, ny vidin'ny fitantanana ary ny vidin'ny fivarotana.
Ny tanjonay dia ny hanangana sehatra loharano tokana, sehatra serivisy ary sehatra fanohanana teknolojia ho an'ny mpanjifa eo amin'ny sehatry ny milina indostrialy plastika. Ampio ny mpivarotra hampihenana ny vidin'ny fividianana, ny kalitaon'ny fifehezana. Ampio ny mpivarotra hivarotra avy amin'ny orinasa any Shina. Manamboara tetezana iray eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpamatsy vola antsika (orinasa afovoany afovoany)
Izahay dia manana fomba fanao evalution voafetra amin'ny haavon'ny kalitao. Ho an'ny fitaovana rehetra amin'ny antsipiriany alohan'ny fanaterana, manana ny injenierinay koa izahay hanamarina.
Izahay dia mahita anay fa tsy mpamokatra sy mpivarotra fotsiny, mijery tsara fa koa mpanjifa mpanampy amin'ny serivisy hahazoana fitaovana qulaity miaraka amin'ny vidiny mora, avelao ny mpanjifa tsy misy ahiahy aorian'ny fividianana.
1.Ny fepetra momba ny injeniera ilaina amin'ny fametrahana
ny milina sy ny fitaovana
2.Fampitana ara-potoana ny fivoaran'ny orinasa mpamokatra entana
milina miaraka amin'ny mpampiasa
3. Manome fanampiana amin'ny toe-javatra ara-teknika, fitambarana visy
ary ny toetran'ny barika ilaina amin'ny vokatra
1.Fanomezana fanampiana ara-teknika eo amin'ny sehatry ny fametrahana, fanendrena ary fiofanana
2.Fandefasana amin'ny antsipiriany ny mombamomba ny mpanjifa
3.Manome tolotra fikolokoloana maharitra sy kojakoja fitehirizana
4.Manome fanampiana ara-teknika ho an'ny mpanjifa amin'ny famolavolana vokatra vaovao
5. Manome fikolokoloana maimaimpoana mandritra ny herintaona